Ogaden News Agency (ONA) – Afhayeenka Ururka Dhalinyarada iyo Ardayda Ogadenya (OYSU) oo Ugu Hambalyaynaya Muslimiinta Ciida Barakaysan
Afhayeenka Ururka Dhalinyarada iyo Ardayda Ogadenya (OYSU) oo Ugu Hambalyaynaya Muslimiinta Ciida Barakaysan
Allaahu Akbar! Allaahu Akbar! Allaahu Akbar! Mahad iyo Ammaan intuba waxay usugnaatay Allaha tabaaraka watacala, ee inagu simay bishan dilxijja, ee haddana inagu simay tobanki maalmod ee uu ku dhaartay, ee hadana inagu simay sanadka maalmihiisa maalinta oogu fadliga badan oo maanta ku’aadan. Maalintan wayn ee ciida Arafo ayaa ah maalin muslimiinta caalamkoo dhan ay ciidayaan. Waa maalin ummada muslimiinta ah dhibaata walbo haysata ay hadana usso kala baratamayaan garoomada salaada si’ay utukadaan Salaada Ciida Arafo iyyago wajigooda ay kamuuqato farxad.
Maalintan barakaysan ee ciida Arafo, anigoo ay sharaf ii tahay inaan kuhadlayo magaca Ururka Midowga Dhalinyara iyo Ardayda Ogadenya, kana fa’iidaysanaya ahmiyada gaarka ah ee ay maalintani leedahay , waxan hambalyo gaara udiraya Madaxda JWXO, Ciidanka mintidiinta ah ee qalabka sida, iyo qaybaha kala duwan ee bulsho waynta reer Ogadeniya ee gesiyiinta ah. Waxan iyana hambalyada ciida udiraya Ummada Somaliyeed meel walbo ay jogaan iyo Muslimiinta caalamka, waxaanan leeyahay Ciid mubaarak! Ciid Mubaarak! Ciid Mubaarak!
Hambalyada Ciida kadib, waxan Ururwaynaha Midowga dhalinyarada iyo Ardayda Ogadenya OYSU, ku bogaadinayaa dadaalka, hiilada iyo hawlkar nimada ay Afar iyo Labaatan sacadood lagarab taagan yihiin halganka aan isooga dulqaadayno gumaysiga tigreega ee huwan magaca itoopiya. Ururka oysu waa awooda iyo tabarta uu halganku kusocdo. Waxaa marag madoonta ah, in maanta aan leenahay quwwad xorriyad moyye waxkale oo joojin kara haba yaraate aysan jirin, middaasna waxa lawaydiin Itoopiya iyo ciddi lasocota. Sababtoo ah, OYSU waa urur Arday iyo dhalinyara ah oo kali waxay kumidoben ay tahay soo dadajinta Xorriyada Ogadeenya ee muddada baadi goobka looguso jiray.
Ciida dilxijja fadligeeda, waxan Ilahay karajaynaya Ogadeniya oo xor ah. Ogadeniya oo dhiiga shacabku qaali yahay. Ogadeniya oo shacabkeedu ku sexanayaan kuna soo toosayaan Cabsi la’aan. Hoyooyinka reer Ogadeniya oon laxidhayn iyyago wax allaala waxay galabsaden uusan jirin. Ogadeniya oo dadkiisu khaasatan caruurtiisu, helayaan waxbarasho iyo cafimaad tayaleh. Ogadeniya oo khayraadka kujira ee dabiiciga ah ay xor uyihiin dadka iskaleh siday kayelayaan. Iskuso wada duubo, waxan ilahay inooga baryaya xoriyad xambaarsan Mustaqbal iffaya ,Hormar iyo Midnimo.
Waxan marlabaad hambalyada Ciida udiraya Dhammaan Shacabka reer Ogadenya. Sidokale, waxaan ummada reer Ogadenya guda iyo dibadba kula dardaarmaya inay adkeyaan midnimada iyo isku tashiga, madaamo aytahay tubta kaliya een ku gaadhi karno waxaan higsanayno. Waxan sidaa silamida kula dardaarmaya inay ku Qancaan una samraan halganka. Allah subxaanahu watacala, waxba kuma aha inuu barri xorriyad inasiiyo, lakiin adduunku waa imtixaan Illahayna samirkeena inu fiirinayo aya lagayaba. Marka aan samirka samirka samirka badino.
Nabi Ibraahim calayhi salaam, wuxu ilahay siiyay nabi Ismaciil issago 86 sano jira. Haddana wuxu usheegay Illahay nabi Ibraahim inu qalo wilkiisi Nabi Ismaciil. Nabi Ibraahim iyo Nabi Ismaciil laba duba way Samreen wayna ku qanceen. Ilahay ma’uusan rabin in Nabi Ismaciil lagowroco lakin Nabi Ibraahim aya samirkiisa la ittixaamayay. Markay imtixanki gudbeena wuxu ilahay yidhi “INNAA KADAALIKA NAJSIL MUXSINIIN” oo macnaheedu tahay “ Sidaas Ayyaan dadka wanaagsan ku’abaal marina”. Waxan uga danleyahay qisadas anso qaatay ee nabiyullaahi Ibraahim in aan xasuusano qiimaha samirku leyahay si’aan oogu samirno kulaylka halganka ee ay kumanaanka kun ushihideen, kumanaan kalana ay ubarakeceen, boqolaal ay u curyameen, kumanaan caruur ah ay u agoon iyo rajobeen. kumanaan kalana xabsiyada dhexdooda loogu silic maryaadinayo.
Ciid Mubaarak! Ciid Mubaarak!
Jabarti Ismaciil Baynax
Ku xigeenka Xoghayaha Guud ee OYSU Ahna